G! izixhobo, ukuququzelela ukusetyenziswa kweMephu yeBentley -Geofumadas
Epreli, 2010 Geospatial - GIS, Microstation-Bentley, egeomates My
Kwiintsuku ezimbalwa ezedlule ndiqalise uphuhliso .NET I-Visual Basic ye-Microstation, endiyethembayo yokuyicombulula umda weBentley Map, kunye nayo Umlawuli weGeospatial. Ukwenza oku, ndibambe umfundi omdala esiqale ngaye geofumar xfm apho xa kuphuma ku-comal, nge-cappuccino enhle kunye ne-amareto siye safumana utshintsho oluvela kwi-V8i luye lwasetyenziswa "Iimephu ezisisiseko zeMephu yeWindows" y Msgstr "Umlawuli weMephu ye-XNUMX".
Oko kulula, iBentley ifuna ukuba yi-CAD eyenza i-GIS, kwaye nangona yamkelwe kakuhle kwiiprojekthi ze-cadastral, umqobo abasebenzisi abaqhelekileyo xa beqala ukudibana neBentley Imephu kufuneka wophulwe. Umsebenzisi we-ESRI, uManifold okanye u-AutoCAD Map, ofuna ukwenza iprojekthi eyedwa, uthenga iphakheji kumsasazi wengingqi emva kwethutyana efunda incwadana eqonda ukuba akazi ukuba aqale ngaphi.
Ngoko ke, oku kufike G! Izixhobo zeBentley ImephuIsisombululo endinethemba lokuba ndiza kusilungiselela kwiinyanga ezimbalwa kwaye siyakusebenza kwiPowerMap, ekufanele ukuba kwenzeke ngayo ukuqala iprojekthi kwiBentley Map, ngaphandle kokusebenzisa iGeospatial Administrator. Enye yezinto ezinomtsalane kukuba izakuza neprojekthi yeendidi zetemplate, umaleko kunye neepropathi esele zenziwe, kunye nomzekelo kamasipala wokuba umsebenzisi athathe isigqibo sokuba athathe ntoni, alahle okanye enze entsha. Okwangoku ndikubonisa imbonakalo:
Umbono ukwinxalenye yawo yokuqala, iwizard evumela ukusuka kwiprojekthi yetemplate, ukusuka kwicala lemephu, ukuyila oko ikufunayo ngaphandle kokungena kuMlawuli weGeospatial. Into enje ngokwenza ukusuka kwiArcMap okwenziweyo kwiArcCatalog, ukuze into eyakhiweyo njengemigangatho yenze ulwakhiwo lwe-xml olulungele ukusebenza nokunxibelelana nedatha yangaphandle.
Ngenxa yale nto ndichazile iithebhu ezinhlanu ekubhekiselele kulo mzekelo:
Ulwazi olubanzi: Apha kukhethwe igama leprojekthi, imbewu yefayile kunye nonxibelelwano lwedatha yangaphandle. Ngale nto, i-xml schema iyenziwa, kunye nendawo yokusebenza yomsebenzisi, umzekelo: Umcebisi, oya kusebenzisa kuphela uchungechunge lweziqulatho kwaye akusiyo yonke into eyenziwa yintloko yesebe.
izigaba: Kule ndawo yolawulo, unokukhetha, kuluhlu lweendidi esekwe ngaphambili, ezo zinomdla. Umzekelo, I-Cadastral, i-hydrography, indlela kunye nolawulo. Ukwazi ukwenza kwakhona ezintsha.
Iiklasi (Iimbonakalo): Kusuka kwiididi ezikhethiweyo, ungakhetha ezo klasi eza kuba nomdla, umzekelo:
udidi Cadastral, kuphela umaleko iibhloko kunye nezakhiwo, udidi hydrography kuphela nezamazembe imilambo kunye nemilambo, umaleko iindlela zamazembe izitrato nobumelwane maleko Administrative, iisayithi kunye lokubiyela lwedolophu.
Izakhiwo zeklasiApha, kuthathelwa ingqalelo iiklasi ezikhethiweyo, iipropathi ezithile zeklasi nganye zinokuchazwa okanye ziguqulwe, umzekelo:
izakhiwo Iklasi: line-orenji, nihluthe tyheli, ukungafihli 50%, kunye sophawu kunye cadastral wokungena, ngokufanayo njengoko iqhosha, iifoto route kunye enxulumene nge ODBC netafile avaluocat kwidathabheyisi I SQL yam kunye nokusasazwa bokusebenzisa iikholam, iklasi, umgangatho, uvavanyo, njl njl.
Iklasi ejikeleze idolophu: umgca omdaka, ukugcwala okumdaka ngebala, ubukhulu 2, iimpawu: Unyaka wokuvunywa, indawo, iperimeter, unyaka wengqikelelo, izithintelo zoluntu. Izithintelo ezinxulumene nokudityaniswa kohlobo thambeka kunye ne hyperlink kwixwebhu.
Umzekelo nje, ekugqibeleni, into onokuba nayo ziindidi, iiklasi kunye neepropathi ezikulungeleyo ukwenza idatha. Kuya kuthatha kuphela ukukhetha ukuba ndiza kusebenza kulungelelwaniso lwearhente yokuthengisa izindlu nomhlaba, zoba into kwaye ekugqibeleni kwayo kuphakanyiswe ifom ukuze ungene kwi-cadastral. ... yakha nje!
Emva koko, xa ndibonisana nento, ndiza kuphakamisa iipropati zeso sakhiwo, ezikhoyo kwiikholam eziboniswe kwitheyibhile edibeneyo, isiqhagamshelo kwiifoto ezinxulumene nazo, njl njl.
Okwangoku iwizard indonwabisile, kodwa iya kufuna ukudibanisa le misebenzi ye-GIS ethi iBentley Imephu izise kwaye iphuhlise ezinye ezingasebenzi kangako. Ngaphandle kokulibala okwenziwe yiJografi kunye noko kusafuneka, njengokuhambisa, ukususa okanye ukubeka iimpawu, ukuvuselela indawo / iperimitha kwi-xml, unxibelelwano noGoogle Earth, ukubonisa kweempawu ...
Kuhlekisa, ukuba njengoko ndisebenzayo, ndiyaqonda ukuba uBentley ucinga ngezinto zonke xa esebenzisa i-xml kwi-V8 dgn, umsi omkhulu ovela kwi-2004, izihloko awazilindele ukuzicombulula Yiba kunye Andazi ukuba ndizokwazi ukuya kuba isimemo esisemthethweni siza kum sisesichengeni. Emva koko kwimephu ye-Bentley bebesebenzisa oko kuhleli nawuphi na umsebenzisi we-GIS, ngelishwa kungekho kulwazi olusebenzayo lomsebenzisi ongajonganga nto okanye oluvela kolunye uphawu lwesoftware.
Umngeni unomdla, ndikuxelela apho.
Post edlulileyo«Ngaphambilini PlexEarth kuzisa 2.0
Post Next Lungisa idatha ngokusekelwe kwiseshoni echanekileyoOkulandelayo »